Semalt: SEO बनाम पीपीसी
< div> कुनै पनि वेबसाइटको सबैभन्दा खराब समस्या क्लिकहरू हुँदैछ। यी वेबसाइटहरूका प्राथमिक कार्यहरू हुन्, र तपाईंको वेबसाइटमा क्लिक बिना, तपाईं यसलाई बेकार भन्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने तपाईको वेबसाइट आगन्तुकहरु वा दर्शकहरु को लागी डिजाइन गरीएको हो र तपाईसंग एक वेबसाइट छ भन्न मात्र सक्षम हुनु हुँदैन।
दुःखद वास्तविकता वेबसाइटहरू बिना नै हो; तपाईंको व्यवसायको सीमित पहुँच छ। त्यहाँ ग्राहकहरूको एक सीमित संख्या छन् जो शारीरिक रूपमा तपाईंको भवनमा आउँदछन्। इन्टरनेट को साथ, तपाइँको व्यापार को लागी खुल्ला छ। तपाईंको दर्शकहरू तपाईं कुनै शहर, राज्य, वा देशमा पाउनुहुने भन्दा धेरै ठूला छन्। यस कारणले गर्दा, एक बिन्दु वा अर्कोमा, बढ्नको लागि आशा गर्ने प्रत्येक व्यवसायको एक वेबसाइट हुनुपर्दछ।
इन्टरनेट को अवधारणा हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा फेला पारे जस्तै छ। तपाईंको छिमेकको व्यस्त मोडमा लिम्बू पानी खडा गर्ने कल्पना गर्नुहोस्, तर तपाईंले कुनै ग्राहक पाउनु भएन। त्यो मात्र होईन, तर कसैले पनि सोधपुछ गर्न रोक्न सक्दैन। यो अलि डिमोरलाइजिंग हुन सक्छ किनकि तपाईंसँग यो दर्शन थियो; तपाईंसँग धेरै लामो खोजको आशा थियो, तर यसको सट्टामा कोही आउँदैन। यो पहिलो स्थान मा खडा हुनु को प्राथमिक उद्देश्य हराउँछ। हामी महत्त्वपूर्ण समानता हेर्दछौं o कसरी वेबसाइटहरूले काम गर्छन् जहाँ तिनीहरू उपयोगी वा आवश्यक हुन्छन् जब उनीहरू आगन्तुकहरू द्वारा हेर्छन्।
Semalt एक शीर्ष-खाच पहिलो पृष्ठ हावी वेबसाइट बनाउँछ। सबै उपलब्ध विकल्पहरू प्रयोग गर्न, तपाईंले यो गर्नका लागि सबै सम्भावित कानूनी विधिहरू विचार गर्नु आवश्यक छ। दुई मुख्य तरिकाहरू जैविक र अजैविक ट्रफिक्स हुन्। यी पनि भनिन्छ SEO र पीपीसी तरीका तपाइँको वेबसाइट मा दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्ने।
त्यसोभए त्यो प्रश्न कुन राम्रो SEO वा PPC हो?
< h3> पीपीसी
सबै Semalt वेबसाइट को माध्यम बाट, तपाई पढ्नुहुन्छ कसरी SEO राम्रो गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट बदल्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईले पीपीसीको बारेमा सायद कुनै चीज देख्नुहुनेछ। यो किनभने यस प्रकारको ट्राफिक मुख्यतया अजैविक छ, जुन उत्तम छ केवल त मात्र जब तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइटलाई जीवित राख्न खोज इन्जिनमा पम्प गर्न आर्थिक स्रोतहरू छन् भने।
Semalt ले तपाईंलाई यस लेखमा पीपीसीको बारेमा आवश्यक पर्ने सबै जानकारी प्रदान गर्दछ र कसरी तपाईं यसबाट अधिकतम लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए पीपीसी भनेको के हो?
पीपीसी भनेको प्रति क्लिक भुक्तानी हो, इन्टरनेट मार्केटिंगको एक मोडल हो जसमा विज्ञापनदाताहरू हरेक पटक उनीहरूको कुनै एक विज्ञापन क्लिक गर्दा निश्चित शुल्क तिर्दछन्। यस द्वारा, तपाईं आफ्नो साइटमा भ्रमणहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ एसईओ प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट ती भ्रमणहरू अर्गोनिक रूपमा कमाउनको सट्टा।
त्यहाँ पीपीसीका धेरै प्रकारहरू छन्; यद्यपि सबै भन्दा साधारण खोज ईन्जिन पीपीसी हो। यसले विज्ञापनकर्ताहरूलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान खरीद गर्दछ जब कुनैले वेबसाइटमा खोजिएको कुञ्जी शव्दहरू खोजी गर्दछ। जब कुनै विज्ञापन क्लिक हुन्छ, यसले तपाईंको वेबसाइटमा आगन्तुकहरू पठाउँदछ, र तपाईंले खोज ईन्जिनलाई प्रत्येक क्लिकको लागि सानो शुल्क तिर्नु पर्नेछ। यदि राम्रोसँग प्रयोग भयो भने, पीपीसी फीस बेवास्ता गर्न को लागी फाइदाहरु को लागी वेबसाइट प्रदान गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यदि तपाई यो सहि गर्नुभयो भने, तपाई केवल एक क्लिक को लागी $ pay तिर्न सक्नुहुनेछ, तर क्लिकले $ 300 + बिक्रीमा परिणाम दिन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, निश्चित रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले भुक्तानी गर्न मन पर्दैन।
तपाइँको पैसा बर्बाद नहोस् भनेर निश्चित गर्न, तपाइँको पीपीसी अभियान सफल भएको सुनिश्चित गर्न धेरै सामेल छ। प्रक्रिया सही खोजशब्दहरूको खोजी र चयनबाट सुरू हुन्छ। त्यसोभए तपाईंले ती कुञ्जी शब्दहरूलाई व्यवस्थित अभियान र विज्ञापन समूहहरूमा व्यवस्थित गर्नुभयो। र अन्तमा, तपाईले पीपीसी अवतरण पृष्ठहरू सेट अप गर्नुभयो जुन रूपान्तरणहरूका लागि अनुकूलित छन्। खोज इञ्जिनहरूले पुरस्कृत गर्दछन् र विज्ञापनदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्छन् जो प्रासंगिक, बुद्धिमानीपूर्वक लक्षित भुक्तान-प्रति-अभियान अभियानहरू प्रत्येक विज्ञापन क्लिकको लागि कम शुल्क लगाएर सिर्जना गर्न सक्दछन्। यसको मतलब यो हो कि यदि गुगल तपाइँको विज्ञापन र ल्यान्डि pages पृष्ठहरूमा खुशी छ किनकि यसले पाठकहरूलाई सन्तुष्ट गर्दछ, गुगलले तपाईलाई कम शुल्क लगाउनेछ, जसको अर्थ कम लागतमा बढी नाफा हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाई पीपीसी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, Semalt भाँडामा लिनु महत्वपूर्ण छ यसलाई सही बनाउँन र यसलाई कसरी गर्ने सिक्नुहोस्।
तपाइँको पीपीसी सही तरीकाले गर्नु भएको छ
गुगल विज्ञापन एक लोकप्रिय पीपीसी विज्ञापन प्रणाली हो र संसारमा सम्भवत सबै भन्दा राम्रो हो। विज्ञापन प्लेटफर्मले व्यवसायलाई ग्राहक आकर्षित गर्ने विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ जुन गुगलको सर्च ईन्जिन र अन्य सम्बद्ध प्लेटफर्महरूमा देखा पर्दछ।
गुगल विज्ञापनहरू प्रति क्लिक भुक्तान मोडलमा अपरेट गर्दछ। जसमा तपाईं कुञ्जी शब्दहरूमा बिड गर्नुहुन्छ र प्रत्येक क्लिकको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो विज्ञापनहरूमा पाउनुहुन्छ। प्रत्येक पटक कुञ्जी शब्दहरूको स्ट्रि are खोजी गरिन्छ, गुगलले यसको खोज परिणाम पृष्ठमा यसको विज्ञापन स्थानमा विजयीहरूको सेट छनौट गर्नको लागि विज्ञापनहरूको पोखरीमा क्रमबद्ध गर्दछ। गुगलले यसका विजेताहरूलाई कारकहरूको संयोजनको आधारमा निर्धारण गर्दछ, जसमा
उनीहरूको कुञ्जी शब्दहरूको सान्दर्भिकता
यसको किवर्ड बिट्सको आकार
अझै महत्त्वपूर्ण कारक विज्ञापनदाताको विज्ञापन रैंक हो, एक मेट्रिक दुई मुख्य कारकहरू गुणा गरेर गणना गरिएको:
सीपीसी बिड (विज्ञापनदाताको रूपमा तपाईले अधिकतम रकम तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ)
गुणवत्ता स्कोर (एक मान जुन तपाइँको क्लिक-थ्रु दर, प्रासंगिकता, र ल्यान्डि page पृष्ठ गुणस्तर गणना गर्दछ)।
यस प्रणालीले विजयी विज्ञापनदाताहरूलाई उचित मूल्यमा सम्भावित ग्राहकहरूसम्म पुग्न अनुमति दिन्छ। मूल्य लचिलो छ कि देखेर हरेक व्यवसाय एक शट दिन्छ।
तपाईं यसलाई एक लिलामीको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ।
< div> गुगल विज्ञापनहरू मार्फत पीपीसी मार्केटिंग संचालन विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि गुगल सबैभन्दा लोकप्रिय खोज इञ्जिन हो। यसको मतलब तपाईंको विज्ञापनहरू धेरै जसो दर्शकहरूले हेरेका छन्। यो तपाइँको वेबसाइट को लागी यातायात को Google को भारी मात्रा को केहि प्राप्त मा एक शट दिन्छ, र यसैले, तपाइँको वेबसाइट को लाभ हुन्छ र तपाइँको विज्ञापन मा क्लिक गर्दछ। तपाइँको विज्ञापन कसरी देखा पर्दछ भन्ने फ्रिक्वेन्सी कुन किवर्ड र मिलान प्रकारहरूमा तपाइँले छान्नुहुन्छ निर्भर गर्दछ। जबकि कारकहरूको संख्याले तपाइँको पीपीसी विज्ञापन अभियान कती सफल हुन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ, तपाइँ यसमा केन्द्रित भएर यसबाट सक्दो धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
/b> तपाईको पीपीसी अभियानका लागि सान्दर्भिक कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्नुहोस्।
ल्यान्डि Page पृष्ठ गुण: तपाईंको अभियान आगन्तुकहरू तपाईंको लिंक क्लिक गर्न को लागी समाप्त हुने छैन तर सामग्री तपाईंको वेबसाइटको मजा लिदै अन्त हुँदैन। प्रदान गर्दछ।
गुणवत्ता स्कोर: पीपीसीमा, एक राम्रो गुणको वेबसाइटले पनि फरक पार्छ। तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू, अवतरण पृष्ठहरू, र पीपीसी अभियान सबै यसमा योगदान गर्दछ। राम्रो गुण स्कोरका विज्ञापनदाताहरूले कम लागतमा अधिक विज्ञापन क्लिकहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछन्।
रचनात्मक: तपाईंको विज्ञापनहरू दर्शकहरूलाई आकर्षक र प्रलोभनमा पार्नुपर्दछ। र यदि तपाईं प्रदर्शन नेटवर्कमा विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं केही उपकरणहरू डिजाइनर-गुणवत्ता विज्ञापन सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन क्लिकहरूको माग गर्दछ।
SEOs कार्बनिक तरीका हो तपाईंको वेबसाइटलाई दर्जा दिन। तिनीहरूले कीवर्डहरू, गुण संरचना, लिंकहरू र अधिक सुविधाहरूको प्रयोग समावेश गर्दछ तपाईंले Semalt वेबसाइट मार्फत पढ्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ। एसईओहरूले खोज ईन्जिनलाई यो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइटले मूल्यवान जानकारी बोक्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरू अवलोकन गर्न इच्छुक छन्। खोजशब्दहरू एसईओको सायद राम्रो हिस्सा हो किनभने ती तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक पाउने एक ग्यारेन्टी तरीका हो। जब प्रयोगकर्ताले कुनै कुराको लागि खोजी गर्दछ, गुगलले ती खोजशब्दहरूमा निर्भर गर्दछ जुन कुन वेबसाइट र वेब पृष्ठहरूले प्रयोगकर्ताहरूले खोजी गरिरहेका जानकारीहरू प्रदान गर्दछ।
खोज इञ्जिनहरूले कुञ्जी कारणहरूको लागि कुञ्जी शब्दहरूको मान गर्दछ
उनीहरूले आफ्नो काम सजिलो बनाउँदछन्: के तपाईंले याद गर्नुभयो कि Google ले उनीहरूलाई तपाईंको खोजी परिणामहरू फेला पार्नको लागि कति लामो समय सम्म प्रदर्शित गर्दछ? इन्टर्नेट प्रयोग गर्दा स्पीड एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खोज इन्जिनहरू २०--30० सेकेन्ड खर्च गर्न चाहँदैनन् उनीहरूले खोजीको लागि उपयुक्त परिणामहरू फेला पार्न अघि; यसैले उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूको लागि छिटो परिणामहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन किवर्डहरूको आवश्यकता पर्दछ।
शुद्धता: बिना खोजशब्द ईन्जिनसँग उद्देश्य वा प्रकार्य परिभाषित गर्ने कुनै तरिका हुँदैन। वेबसाइटहरूको। Semalt वेबसाइटमा, तपाइँ एसईओ, सेवाहरू, र कीवर्डहरू जस्ता शब्दहरूको स्थिर प्रयोग पाउन सक्नुहुनेछ। यी शब्दहरूले खोजी ईन्जिनहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ कि Semalt एक अग्रणी र एक शीर्ष-वर्ग एसईओ अनुकूलन कम्पनी हो। कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गरेर, खोजी ईन्जिनहरूले सहि वा नजीकबाट सम्बन्धित परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ। तिनीहरू बिना, खोज इञ्जिनहरूले परिणाम प्रदर्शन गर्न अनुमानहरूमा भर पर्नु पर्ने थियो, जुन राम्रोसँग काम गर्दैन।
Seemalt तपाइँको वेबसाइट को सहि चीजहरु सही ठाउँमा राखेर मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको आगन्तुकहरू र खोज ईन्जिन क्रॉलरहरूलाई तपाईंको वेबसाइटको माध्यमबाट सजिलै सार्न सक्षम गर्दछ। यो सुविधा पछिल्लो तत्व हुनसक्दछ जुन तपाईं हराउनुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तपाईंको एसईओ कुञ्जी शब्द प्रयोग कती राम्रो छ, तपाईंको वेबसाइट अझै पनी सजीलो छैन यदि यो सहि संरचित छैन भने।
वर्षौंदेखि, Semalt धेरै ग्राहकहरु र वेबसाइटहरु संग काम गरेर मूल्यवान अनुभव को विकास भएको छ। यी बर्षहरूमा, एसईओ कीवर्डहरूको शानदार प्रयोग गर्ने वेबसाइटहरू फेला पार्न यो सामान्य भएको छ। तर यी वेबसाईटहरूले कुनै पनि ट्राफिक वा क्लिकहरू पाउने छैनन्, जुन वेबसाइट मालिकहरूका लागि समस्या हो।
जब तपाईं यसको सबै तत्वहरूको वेबसाइट स्ट्रिप गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग प्रत्येक वेबसाइटको कंकालको रूपमा कुञ्जी शब्द हुन्छ।
गुगलको एल्गोरिथ्म यो जानकारी मा निर्भर गर्दछ खोज इनपुट्सबाट स col्कलन गर्दछ र तपाईंको डाटालाई तपाईंको साइटलाई क्रमबद्ध गर्न प्रयोग गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो वा उत्कृष्ट मध्ये एकको रूपमा दर्जा प्राप्त गर्न, Google ले तपाईंको वेबसाइटहरू प्रति यसको प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारलाई हेर्छ। यो ध्यान दिइयो कि राम्रो संरचित वेबसाइटको लागि, आगन्तुकहरू साइटमा लामो समयसम्म रहन्छन्, र खराब संरचित साइटले तपाईंको दर्शकहरूलाई टाढा पठाउँदछ।